Indlu yasemapulazini enama-acre angu-8 - I-Airbnb
Indlu yasemapulazini enama-acre angu-8
Bahçeköy Köyü, Tekirdağ, i-Turkey
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Denep
Izwe lethu lingama-acre angu-8 futhi lise-Bahçeköy, idolobhana eledlule ngaphambi kokuza e-Longirdağ/Kıyıköy. Kukhona i-container eyi-1 kanye nenye indlu eyi-1 endaweni efanayo. I-logo yindawo ehlanzekile phansi kwamahlathi. Kunamasimu, izihlahla zezithelo nendawo yomlilo emhlabeni. Umfudlana udlula emhlabeni. 2 imiz ngemoto nemizuzu engu-20 ngokuhamba ngezinyawo ukuya enkabeni yedolobhana. Kukhona nama-acres angu-5 kuya kwangu-8 azungeze le ndawo angavamile. Yiphaneli encane yamalahle eyakhiwe ngumthwebuli wezithombe, umdwebi, abaklami.
Ifanele labo abafuna ukuba neholide langasese nemvelo. Cishe kufana nokuphumula. Ifudunyezwe yindawo yomlilo. Sinikeza izinkuni. Ungabuka izinkanyezi, ukhanyise umlilo wakho, futhi ube nesikhathi esimnandi kude nomsindo wedolobha nabangane bakho. Kukhona enye indlu endlini yakho, kodwa awukwazi ukuyibona kusuka ezihlahleni ngokuqhelelana.